I-OnePlus 5T: Ukucaciswa, ixabiso kunye nokufumaneka kuqinisekisiwe | I-Androidsis
I-OnePlus 5T ngoku isemthethweni: Yazi zonke iinkcukacha
Ezi veki zimbalwa zidlulileyo Sithethile amaxesha amaninzi malunga ne-OnePlus 5T. Ifowuni entsha evela kwinkampani yaseTshayina ibisenza uchulumanco kunye namarhe amaninzi. Sele phantse iveki ukusukela oko iinkcukacha zesixhobo. Kodwa Kuze kube izolo, nge-16 kaNovemba, ukuba umcimbi wokubonisa ngokusesikweni yenzekile.
Ekugqibeleni, emva kokulinda ixesha elide, Sele siyazi yonke into malunga nale OnePlus 5T. Inguqulelo entsha ye-OnePlus 5, efika malunga neenyanga ezintlanu kamva. Emva koko sikuxelela konke malunga iinkcukacha, ixabiso kunye nokufumaneka kwesi sixhobo. Ukulungele ukudibana nale fowuni intsha?
Okokuqala sikubonisa kunye uluhlu olupheleleyo lweenkcukacha ze-OnePlus 5TKe, sinokuqinisekisa ukuba ukuvuza kwezi veki bekuchanekileyo kangakanani.
1 Iinkcukacha ze-OnePlus 5T
Iinkcukacha ze-OnePlus 5T
Enye yezinto ezinomdla kakhulu ukusukela oko uyilo lwaputshuzwayo kukuba uphawu lwaseTshayina ekugqibeleni lujoyina indlela engenamsongo yokubonisa. Ke le smartphone intsha inescreen esine-18: 9 ratio, umlinganiso weenkwenkwezi wale 2017. Iya kuba yeyonyaka olandelayo.
Ezi yinkcazo epheleleyo ye-OnePlus 5T:
Inkqubo yokusebenzaI-Android 7.1.1 Nougat phantsi kwe-OxygenOS 4.7.0
Isikrini: I-6,01-intshi ye-AMOLED ngenkxaso ye-sRGB kunye neDCI-P3 ngeGorilla Glass 5
Isisombululo sescreenIsisombululo esipheleleyo se-pixels eziyi-1.080 x 2.160
Umlinganiselo wesikriniI-18: 9
Ubungakanani bePixel: 401 ppi
Inkqubo: I-Qualcomm Snapdragon 835 Octa-core 10 nm kwi-2,45 GHz
i-ramI-6 okanye i-8 GB
Ukugcina: 64 okanye i-128 GB
Ikhamera yangaphambiliI-16 MP ye-Sony IMX371 ene-f / 2.0 ukuvula
Cámara traseraIkhamera ezimbini ze-16 MP ukuvula f / 1.7 I-Sony IMX 398 kunye ne-20 MP ukuvula f / 1.7 I-Sony IMX 376K eneDVD yeDual
Ibhetri: 3.300 mAh ngentlawulo ekhawulezayo yeDash
ConectividadI-LTE Cat. 13, iBluetooth 5.0, GPS, i-GLONASS, iGalileo, iWi-Fi MIMO 2 × 2
abanye: Umfundi weFingerprint ngasemva, ukuvulwa kobuso, i-3.5mm i-headphone jack, i-Dual SIM, i-USB 2.0 Type-C, Isilumkiso sesilayidi
Ubukhulu: 156,1 x 75 x 7,25 mm
U bunzima: Iigram ezili-162
imathiriyeli: Anodized anti-zeminwe aluminiyam
Njengoko ubona kwinkcazo esemthethweni yesixhobo, Iinguqulelo ezimbini zefowuni ziya kukhutshwa. Ukudityaniswa okubini okunokwenzeka kwe-RAM kunye nokugcina ukukhetha kubasebenzisi. Into esele ivuza, kodwa esele iqinisekisiwe ngokusemthethweni. Ukuphumla, siyakubona oko uninzi lweenkcukacha zazivezwe kukuvuza okuphelileyo kwiveki ephelileyo. Ke zimbalwa izinto ezimangalisayo, kodwa kunokuthiwa le OnePlus 5T yeyona fowuni inamandla kwaye ngokuqinisekileyo iya kuthanda intengiso.
Emva kokwazi iinkcukacha ezipheleleyo ngesixhobo, umbuzo omkhulu olandelayo esizibuza wona uza kubiza malini. Iya kuthengiswa nini. Ngethamsanqa, umcimbi wokubonisa isixhobo ukwenzile ukuphendula le mibuzo. Inxalenye elungileyo yile Zihambile iintsuku apho ufuna isimemo sokuthenga ifowuni ye-OnePlus. Ezo ntsuku ngoku ziyinxalenye yexesha elidlulileyo.
Ukulandela imeko yesiqhelo yenkampani, Ixabiso le-OnePlus 5T liphantsi ngokubonakalayo kunelo leefowuni eziphezulu Ukusuka kwimarike. Ngaloo ndlela akukho nto imangalisayo. Ngapha koko, ixabiso lale nguqulo intsha yesixhobo alinakutshintsha xa kuthelekiswa naphambi kwalo.
El Ixabiso le-OnePlus 5T liya kuba ngama-euro angama-499 okanye iidola ezingama-499, Kuxhomekeka kwintengiso, yenguqulo ene-6GB ye-RAM kunye ne-64GB yokugcina. Ngelixa uguqulelo lwefowuni ene-8GB ye-RAM kunye ne-128GB yokugcina iya kuba nefayile ye- Ixabiso lama-euro angama-559 okanye iidola ezingama-559.
Ngokumalunga nokufumaneka kwesixhobo. I-OnePlus ikuqinisekisile oko Iya kufumaneka kumazwe aliqela aseYurophu, kubandakanya neSpain, ukuqala ngalo Lwesibini, Novemba 21. Iya kufumaneka eMelika. Ukuthengwa kwesixhobo kuya kubakho ngefayile ye- iwebhusayithi yenkampani. Ukulinda sele kufikelele esiphelweni, ngolwesiBini kuya kubakho ukuthenga i-OnePlus 5T. Ucinga ntoni ngefowuni entsha yohlobo lwesiTshayina? Ngaba iphila ngokulindelweyo?
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » I-OnePlus 5T ngoku isemthethweni: Yazi zonke iinkcukacha
I-Sonic Forces: Imfazwe ekhawulezayo ngoku iyafumaneka kwi-Android
I-beta ye-Android Oreo ngoku inokufakwa kwiHuawei P10 kunye neP10 Plus